Fankalazana ny Andron'i Afrika Atsimo 2019 any Bangkok
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fankalazana ny Andron'i Afrika Atsimo 2019 any Bangkok
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Mahagaga Afrika Atsimo Ny fankalazana ny fetim-pirenena dia natao tao an-drenivohitra Thai tao amin'ny hotely kintana 5 Siam Kempinski.
IZY Andriamatoa Geoffrey Quinton Mitchell Doidge - Sary © AJ Wood
HE GQM Doidge dia nanao kabary fetin'ny fahalalahana omaly alina ho an'ny mpanatrika marobe. Noho ny fahazoan-dàlana tsara nataon'ny Masoivoho SA tao Bangkok, dia navoaka teto manontolo ny kabarin'ny masoivoho tsara fanahy.
Sary © AJ Wood
Ny lahateny dia nialohavan'ny fotoana nanginana ho an'ireo rehetra namoy ny ainy tany Sri Lanka tamin'ny fanafihana tamin'ny herinandro lasa teo.
Notantarain'ny Masoivoho fa niantso sy nody tany an-trano nandritra ny 5 taona izy sy Carol ary nahatsapa ho an'ireo tra-boina rehetra.
Ny Minisitra lefitra misahana ny raharaham-bahiny Andriamatoa Virasak Futaku
Solontena avy amin'ny governemanta Thai Thai sy ny tafika
Ramatoa sy gents ary ireo Afrikana Tatsimo rehetra nanatevin-daharana antsika androany hariva!
Alohan'ny hanombohantsika amin'ny fizotranay ofisialy, miangavy anao hiaraka amiko amin'ny fijerena fotoana mangina ho fahatsiarovana ireo maro izay nanaiky ho resin'ny fipoahana baomba tao Sri Lanka.
Nahazo voninahitra aho tamin'ny nanompo tao amin'ny masoivohon'i Afrika Atsimo nandritra ny dimy taona sy tapany. Ny Afrikana Tatsimo dia miombona amin'ny firaisankina amin'ireo Sri Lankan rehetra mandritra ireo fotoan-tsarotra ireo.
Ny Andron'ny fahalalahana no ofisialy, Andro Nasionaly atsy Afrika Atsimo. Amin'ity andro ity isika dia mankalaza ny iray amin'ireo fanavaozana politika lehibe indrindra amin'ny tantara maoderina.
Mpitarika roa lehibe tamin'izany fotoana izany, ny filoha Nelson Mandela sy ny filoha FW de Klerk dia nanome mpitarika niavaka izay nitondra ny famaranana am-pilaminana ny fitondrana apartheid ary nametraka ny fototra ho an'ny demokratika vaovao any Afrika Atsimo.
Ireo mpitarika roa ireo dia nahazo ny loka Nobel fandriam-pahalemana tamin'ny Desambra 1993 noho ny politikany mahasoa momba ny fandriam-pahalemana sy ny fampihavanana ary noho ny fanolorantenan'izy ireo ny herin'ny tsara ary hampandroso ny firenena mankany amin'ny fitoviana sy ny demokrasia.
Mofomamy fitsingerenan'ny andro nahaterahana ho an'ny Firenena. Ny masoivohon'i HE Geoff sy Carol Doidge (afovoany) dia eo anilan'ny lefitry ny lefitry ny raharaham-bahiny HE, Andriamatoa & Ramatoa Virasak Futaku - Sary © AJ Wood
Amin'ny 27 aprily 1994, dia hahatsiaro ny sarin'ny filaharana nahavaky ela ny afrikanina tatsimo rehetra rehefa tonga ny Afrikanina Tatsimo an-tapitrisany nifidy ny sambany teo amin'ny fiainany. Ny filoha Mandela dia dimy amby fitopolo ary Arseveka Emeritus Tutu dia 62 taona, tamin'izy ireo vao nifidy voalohany.
Amin'ny 08 May dia hiverina hiverina amin'ny fifidianana indray ny Afrikanina tatsimo, amin'ny fifidianana demokratika marolafy. Mety ny mirary soa ireo antoko 48 mpandray anjara rehetra amin'ny fifidianana ho avy.
Nihinana ny vatan'ny diplaomatika - Sary © AJ Wood
Ny filohan'ny Repoblikan'i Afrika atsimo, ny filoham-boninahiny Cyril Ramaphosa, dia nanaitra fa ny laharam-pahamehana ho an'ny governemanta dia ny famporisihana ny fampiasam-bola lehibe amin'ny toekarentsika, hampirisihana ny fitomboan'ny harinkarena sy ny famoronana asa. Miditra amin'ny vanim-potoana vaovao misy fanantenana sy fahatokisana i Afrika Atsimo.
Tamin'ity taona ity, ny Fanjakan'i Thailand sy ny Repoblikan'i Afrika atsimo, dia nahatsiaro dimy taona roapolo nifandraisan'ny roa tonta ary ny firenena roa tonta dia samy manana ny faniriany hanamafy orina sy hanitatra ny fifandraisana amin'ny sehatry ny varotra, ny fampiasam-bola, ny fambolena, ny fizahan-tany ary ny olona fiaraha-miasa amin'ny olona.
Ny fampidirana sy ny fametrahana rafitra roa tonta ary ny fanatsarana ny fifanakalozana dia mampiseho ireo famantarana mialoha ny fanatsarana ny varotra, ny fampitomboana ny mety ho fampiasam-bola ary ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny olana lehibe maromaro tohanan'ny fitsidihana avo lenta misy eo amin'ny firenena roa tonta.
Ny Fanjakan'i Thailand no mpiara-miasa varotra lehibe indrindra any atsimon'i atsimo ary izahay no mpiara-miombon'antoka lehibe indrindra eto Thailandy. Misokatra amin'ny famatsiam-bola i Afrika Atsimo ary miara-miasa amin'i Thailand momba ny fahafaha-mampiasa vola amin'ny sehatra maro.
Afrika Atsimo, miarahaba an'i Thailand tamin'ny fifidianana natao tato ho ato ary mampita ny firariana farany ho an'ny famitana ny sori-dalan'ny demokrasia.
Te hisaotra ny departemanta sy ny andrim-panjakana rehetra aho; manokana izahay, tianay ny milaza ny minisiteran'ny raharaham-bahiny sy ny sampana misy ny governemanta manohana ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ataon'izy ireo.
Misaotra an'ireo mpanohana marobe anay izahay, Paramount Group, Koi Restaurant, UMH Company Myanmar, Beijing Axis, Integrated Convoy Protection, Console Honorary Saweeng Crueaviwatanakul ary Amazon Colors.
Ny fankasitrahako dia mankany amin'ny Chorus sy Sekolin'ny Mozika ao amin'ny Oniversite Assuming, ary koa Fivera.
Vahiny manan-kaja, tompokolahy sy tompokovavy,
Hanana ny Royal Thai Anthem isika izao.
Miangavy anao aho izao mba hiaraka amiko amin'ny fanoloran-tsakafo amin'ny Mpanjaka Andriamatoa Rama X, ho amin'ny fanjanahana mahomby, ho an'ny fiainana lava, fahasalamana, fanambinana ary fanomezana fahendrena.
Mijanona foana azafady
Hanana ny hiram-pirenena afrikanina atsimo isika izao.
Miangavy anao aho izao hanatevin-daharana ahy amin'ny fanolorana masirasira ho an'ny Andriamatoa Cyril Ramaphosa, ary mirary azy hanana fiainana lava, fahasalamana, fanambinana ho an'ny filohan'ny Repoblikan'i Afrika Atsimo.